China COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Bvunzo fekitori nevatengesi | ZVINOKOSHA
COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Bvunzo
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa mu vitro qualitative Detection yeantigen yenoveli coronavirus muvanhu nasopharyngeal swabs.
COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit bvunzo uye inopa yekutanga mhedzisiro bvunzo kubatsira mukuongororwa kwehutachiona pamwe neanoona Coronavirus. Chero kududzirwa kana kushandiswa kweichi chiitiko chekutanga bvunzo chinofanirawo kuvimba nezvimwe zvinowanika pakiriniki pamwe nekutonga kwenyanzvi kwevanopa rubatsiro rwehutano. Imwe nzira yekuyedza nzira (s) inofanirwa kutariswa kuratidza muyedzo wekuedzwa unowanikwa nemuyedzo uyu.
Iyi kit inoshandisa immunochromatography pakuonekwa. Mutsetse wekuyedza unosanganisira: 1) burgundy yakavezwa conjugate pad ine mbeva anti-novel coronavirus nucleoprotein monoclonal antibody yakasanganiswa necolloidal goridhe, 2) itrocellulose membrane tambo ine imwechete bvunzo mitsara (T mitsara) uye tambo yekudzora (C mutsetse). Iyo T mutsetse wakagara wakaputirwa nema antibodies ekutsvaga yenoverengera coronavirus nucleoprotein, uye iyo C mutsara yakatangira-kuputirwa necontrol line antibody.
Nyore: Hapana chakakosha michina inodiwa; Nyore kushandisa; Intuitive inoonekwa kuturikira.
Kukurumidza: Mhedzisiro mumaminetsi gumi.
Zvakarurama: Mhedzisiro yakagadziriswa nePCR uye Clinical kuongororwa.
Kusiyana-siyana: Inoshanda neoropharyngeal swab, nasal swab uye nasopharyngeal swab.
1.Munhu mumwechete akadzivirirwa mapepa emakadhi ane:
a. Chimwe chigadzirwa
1) Novel coronavirus monoclonal antibody uye tsuro IgG antibody yeRecombined pad
2) Novel coronavirus monoclonal antibody yeT mutsara
3) Mbudzi-anti-tsuro IgG antibody yeC mutsara
b. Imwe desiccant
1) Sampuli machubhu (20): Sample buffer （0.3ml / bhodhoro)
3) Kurumidza Referensi Mirayiridzo (1)
Kuchengetedza uye Kugadzikana
Chengetedza pa2 ℃ ~ 30 ℃ munzvimbo yakaoma uye dzivisa zuva rakananga. Usagwamba. Iyo inoshanda kwemwedzi makumi maviri nemana kubva pazuva rekugadzira.
Mushure mekuvharwa kwealuminium bhegi, kadhi rekuyedza rinofanira kushandiswa nekukurumidza mukati meawa rimwe chete.
Chigadzirwa zita COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Kwayedza Kit
Zita Rekushandisa NGUVA YEMAHARA
Maitiro Ndarama yecolloidal
Chimiro Nasal swab, oropharyngeal swab kana nasopharyngeal swab
Kliniki kunzwisisika 96.330%
Clinical chaiyo 99.569%
Chibvumirano chakazara 98.79%
Kurongedza 1/5/20 bvunzo / atorwa, Maererano mutengi zvinodiwa.
Nguva yekuverenga 10 maminitsi
Tsigiro yebasa OEM / ODM
Zvadaro: COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG IgM Antibody Bvunzo
Ndapota verenga bhuku rekurairisisa usati waedzwa.
2.Take kunze bvunzo kaseti, chiratidzazvizhinji dilution bafa, etc., uye kurishandisa pashure kudzokera mukamuri tembiricha. Kana zvese zvagadzirwa, bvarura aruminiyamu pepa bhegi, tora kaseti yekuyedza woiisa papuratifomu. Mushure mekuvhura bhegi realuminium, kaseti yekuyedza inofanira kushandiswa nekukurumidza mukati meawa imwe.
Shingairira iyo plasma / serum specimen ine iyo pipette, wedzera 1 donhwe (inenge 20ul) yesampuli kune iyo sampuli tsime reyedzo kaseti.uye wozarura iyo specimen dilution buffer inodonha bhodhoro, wedzera madonhwe maviri (anenge 80ul) eiyo specimen dilution buffer kutsime.
4.Kucherekedza nguva: tonga mhedzisiro maminetsi gumi nemashanu mushure mekufungidzira uchiwedzera, usatarise mhedzisiro maminetsi makumi maviri gare gare.
Zvakanaka: Chete tambo yekudzora mhando (C mutsetse) ine mutsvuku, uye tambo yekuyera (T mutsetse) haina mutsvuku. Iyo inoratidza kuvepo kweSARS-CoV-2 inokanganisa maantibhakosi pamusoro pemuganho wekutsvaga weiyo kit kit mune iyo specimen.
Negative: Iyo mitsara mitsvuku inoonekwa pane yemhando yekudzora mutsetse (C mutsetse) uye iyo yekuyera mutsara (T mutsetse). Zvinoreva kuti hapana SARS-CoV-2 inokanganisa ma antibodies mune iyo specimen kana SARS-CoV-2 neutralizing antibodies level iri pazasi pekuonekwa chikamu.
Hazvishande: Hapana mutsvuku mutsvuku unowanikwa pane yemhando yekudzora tambo (C mutsetse), zvichiratidza kutadza. Zvinogona kunge zvichikonzerwa nekushanda kusiri iko kana bvunzo kaseti isingaiti uye inofanirwa kuyedzwazve.
COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG IgM Antibody Bvunzo